DAAWO: Wasakhda Sergio Ramos Waa In La Ganaaxaa-Jamaahiirta Kubbada Cagta Ka Falceliyay Dhacdo Uu Ramos Ku Jaho Wareeriyay Ciyaartoy Victoria Plzen Ah. – GOOL24.NET
DAAWO: Wasakhda Sergio Ramos Waa In La Ganaaxaa-Jamaahiirta Kubbada Cagta Ka Falceliyay Dhacdo Uu Ramos Ku Jaho Wareeriyay Ciyaartoy Victoria Plzen Ah.
Kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa sumcad xun ku yeeshay ficilada waxyeelada ah ee uu gaysto ciyaartoyda uu kaga hor yimaado kulamada kubbada cagta taas oo keentay in uu cadaawad ka dhex samaystay jamaahiirta kubbada cagta.
Dhacdadii ugu waynayd ee uu Serigo Ramos colaad ku abuurtay waxay ahayd finalkii UEFA Champions League markii uu sabab u noqday in Mohamed Salah dhaawac garabka ah looga saaray taas oo keentay in ilaa hadda ay jamaahiirta Masar iyo Liverpool necayb u muujiyaan Ramos.
Laakiin Sergio Ramos ayaan joojin in uu waxyaabo u gaysto ciyaartoyda uu kaga hor imanayo Champions League wuxuuna xalay daanka dumin gaadhay xidig kooxda Vitoria Plzen ah kaas oo dhibaato badani ka soo gaadhay jiqil ama xusul uu Ramos ku wajiga kaga dhuftay.
Jamaahiirta kubbada cagta aduunka ayaa markiiba ka falceliyay ficilkan xun ee uu Sergio Ramos sameeyay waxayna baraha bulshada ku soo bandhigeen sida ay uga xun yihiin in Ramos uu wali sii wato dhaqankiisii xumaa iyaga oo waliba dalbaday in la ganaaxo kabtanka Madrid.
Sergio Ramos ayaa sabab u noqday in xidiga kooxda Victoria Plzen ee Milan Havel uu dhiigu dhulka uga daato isla markaana uu garoonka ku dhex dhexo kadib markii uu Ramos sanka kaga dhuftay jiqilkiisa isla markaana aanu xataa kaadhka digniinta ah ku qaadan.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa qaar ka mid ah falcelintii jamaahiirta kubbada cagtu ku dalbadeen in Ramos la ganaaxo kadib dhacdadii uu dhiiga uga daadiyay Milan Havel.
Taageere ay ugu qoran tahay Damo Womo ayaa soo qoray: “Wasakhda Ramos markale ayuu isticmaalay jiqilkiisa, ganaaxa wasakhda khiyaanoolaha ah. FIFA indhihiina fura, ninkani waa in uu ka mid noqdo dagaalka feedhka iyo laaga ee MMA”.
Taageere kale oo ay Lowkey ugu qoran tahay ayaa isna barta twitterka ku soo qoray: “Sergio Ramos waxa uu u qalmaa in la ganaaxo. Isagu waxa uu garoonka dushiisa ku noqonayaa xayawaan”.
Taageer ay ugu qoran tahay Hony ayaa isna soo qoray: “Waxaa waajib ah in Sergio Ramos laga ganaaxo kubbada cagta, si ula kac ah ayuu ninkaas sanka uga jabiyay” Wuxuuna soo raaciyay calaado uu dareenkiisa ku muujiyay oo cadho iyo murugo muujinaya. Halkan ka daawo ficilka uu Ramos eedaynta kula kulmay.
Garsooraha reer Spain ee Iturralde González ayaa sheegay in Sergio Ramos uu u qalmay kaadhka cas oo toos ah kadib dhiigii uu ka daaiyay xidiga kooxda Plzen laakiin garsoorka ayaa ku fashilmay in ay xataa kaadhka digniinta ah siiyaan Ramos.
Inkasta oo sida la filan karo ay fariimaha Ramos lagu duray badan yihiin haddana jamaahiirta kooxda Real Madrid ayaa difaacaya kabtankooda iyada oo markale uu Ramos la kulmayo falcelin eedaymo xun loogu soo jeediyay.